A mụrụ Chukwu na Afrịka - AFRIKHEPRI
A mụrụ Chineke na Afrịka
Akara nke Chineke na Africa "Nyame"
Matria nke mmadu, Africa ojii bu uzo izizi mbu ebe ihe mbu e kere eke si eche echiche, ndi di na nwunye no na mbu, nwetara echiche nke oge n’otu na otu: ihe gara aga, ugbua. , na ọdịnihu.
Matrix nke ụwa niile, Afrịka ojii bụ mpaghara izizi nke ndụ nke ekpughere ya onwe ya ebe ahụ tupu ịgbanye ya na ifuru, ezumike ya na akụkụ mmadụ.
Matrix nke ndi mmadu, Africa ojii bu uzo izizi mbu ebe ihe ndi mmadu echeburu, ndi di na nwunye ndi Africa ndi Negeb, nwetara echiche nke oge n’otu n’ime ha: ihe gara aga, ugbua. , na ọdịnihu.
Matrix of God, black Africa bu uzo izizi nke ndi Architect, ma ubochi ma taa, echi, ka ekpughere onwe ya site na mbu nke ogugu mmadu ya, nke di na nwunye di na mbu. Onye Afrịka.
Site n’ikpughere Chineke onwe ha, n’ọgwụgwụ nke ajụjụ ha na echiche ha banyere ihe kpatara etu esi adị n’ụwa ha, di na nwunye mbụ ahụ bụ Negro-African ghọtara na, site ugbu a gaa n’ihu, omume ụwa ha n’ebe ndụ ha niile kwesịrị ịdị. kwekọrọ n’uche o mere maka Nnukwu chitelọ.
Na ekele nye Chineke na ịdị mma n'anya ya, di na nwunye ochie Negro-Africa haziri ọha na oke, maka ọrụ ha kwekọrọ, iwu ime mmụọ, omume na omenaala.
Amuru site na ohuru mbu nke uwa na aru elu igwe ya. N'akụkụ a na-akpọkarị, ọ na-aga ma na-aga n'ihu na-aza aha: omenala na ọdịnala, n'agbanyeghị agbanyeghị na sayensị kpebiri, n'agbanyeghị ihe ọ bụla, iji jiri okwu okpukpe na mmepe anya dochie ndị a.
A na - ekwu okwu na - adịbeghị anya, nke ekepụtara ịgha ihe mgbagwoju anya, okpukperechi na mmepe anya na - ebute otu ọdịnaya dịka omume na omenala ma ọ bụ ọdịnala. Nke ahụ bụ, omume nke omume na omume ndị metụtara otu ndị na mmekọrịta ha na Chineke, onwe ha, ndị mmadụ ibe ha, na gburugburu ha a na-ahụ anya na nke a na-adịghị ahụ anya. Nke ahụ bụ, ememme ncheta niile bu n’uche icheta ihe gara aga.
N'ihi na di na nwunye primro-African bụ ndị izizi chọpụtara ịdị adị nke Chineke, maka na di na nwunye ndị mmekọ nwoke na nwanyị bụ nna nke mmadụ na agbụrụ niile, n'ihi na, n'ikpeazụ, di na nwunye ochie na mba ụwa gbachiri ụwa anya, o doro anya na nkọwapụta ha na nkà mmụta okpukpe na arụmọrụ nke omume na nka ha buru ụzọ mụọ ụmụ ha niile.
African Divine Trinity Horus-Osiris-Isis
Chineke mere njem gaa na akpa nke onye nyocha ya nke ndi Negoro-Africa nke kpughere ya ndị ọzọ n’onwe ya, Semites na ndị Indo-Europe, ndị na-arụ ọrụ ọlaghachị azụ na isi mmalite ahụ ịbịa drinkụọ. aka amara nke Kamita , Negro-African Egypt.
Mgbe furu efu nke melanin, dika di na nwunye Negro-African di ndu, Chineke were agba, nkuzi izizi bidoro ịsọpụrụ ya ka a tụgharịrị ma kwekọọ na ọnọdụ ndị ọzọ n'otu oge ahụ a napụrụ ya ebumnuche ya. , nke ahụ bụ ikwu maka ọrụ mmadụ.
Kaosinadị, Chineke a nke bụ naanị Chineke onye dere nke Okike yana onye nyocha ya nke Negro-African na-aga n’ihu na-egosipụta akara okpukpe niile dị adị.
Chineke nke Negro-African: nna nna nke na-akpali mmụọ nsọ
N’oge nwa nwoke a, onye isi ala a bụ onye Africa Africa Atoum dit Amon dit Râ, na-ekwupụta, site n’ọnụ nnukwu ndị isi ya:
"... A bụ m onye niile mgbe naanị m nọ na Nun, abụ m Re n'ụdị ebube ya mgbe ọ malitere ịchị ihe o kere ... Abụ m nnukwu chi ahụ nke si na ya pụta. ọbụlagodi… ọ bụ ụnyaahụ m maara echi… ”.
O kwukwara, sị:
"Eji m ihe si n'ọnụ m pụta n'ụdị niile" ,
"... Abụ m onye isi mgbe ebighebi ... a zonariri ụdị m n'ezie, n'ihi na abụ m onye amaghị ..." 
Mgbe puku afọ abụọ na narị afọ ole na ole gasịrị, na 1300 BC, onye ọcha mbụ, Javeh, kwuru na Jehova kwuru na Eholim, onye nke ikpeazụ, igosi onwe ya na ihe okike, ga-agbaso otu ụzọ okenye ya. na Negro-African nlereanya.
N’ezie, Javeh kwuru na Jehova kwuru na Eholim ga-adị n’onwe ya, ga na-amali n’elu abis nke nwere, dịka ụmụ Nun, nje nke ihe niile ekere eke, site n’Okwu ahụ, ga-aga n’ihu okike ma ọ ga - anọgide bụrụ ihe omimi nke ihe omimi.
Isi okwu nke Chineke ọcha a, ya bụ Nna-Allah na Allah ga-ekwupụta ihe nketa ya, nke mbụ site na nkwekọrịta nke abụọ, nke abụọ site na ncheta ole na ole banyere okike nke ụwa na mmadụ.
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na mmadụ kwenyere Enel onye kwenyesiri ike na "Aëloim", nke ọzọ gbasara Eholim, pụtara "Onye-Chi-", na ndị cabalist na-anọchite anya Chineke n'ụdị mmadụ nke akụkụ niile nke ahụ jupụtara. Ọ bụ ọrụ, ego ọhụrụ a emere n'Aumum dit Amon dit Râ na-egosi na nna nna ndị isi ala bụ Negro-Africa n'ezie.
N'ezie, iji gosipụta na ọ dị n'otu, Chineke Negro-Africa ekwughi:
"Onweghi ndị otu nọ n'ime m nke a napụrụ chi ... ",
tupu ịkpọ aha, otu, na isi ya ruo na mkpịsị ụkwụ ya, ndị otu ya dị nsọ nke otu n'ime ọtụtụ ndị a chebere onwe ya, ya bụ, chi nke nzukọ ya.
Ọ bụrụ na Kristi zuru oke site na akụkụ atọ "Nna, Ọkpara, na Mmụọ Nsọ" nke Chukwu-Nna, Islam, dịka ọ siri dị, na-amata Allah otu narị (100) nke naanị Iri itoolu na itoolu (99) ka amatara. Na narị narị, nke a na - apụghị ịgbagha agbagha, na - anọgide bụrụ ihe omimi nke ihe omimi.
Ọ bụ ihe ịtụnanya na icheta na Atoum dit Amon dit Râ nwekwara aha otu narị, na nke na-anọgide bụrụ ihe omimi nke ihe omimi ahụ ka bụ maka mmadụ nile, belụsọ Isis, onye isi ojii, onye nwere ihe ịga nke ọma mee ka ekpughere ya.
Izi ihe banyere agụmakwụkwọ okpukperechi nke Negro-Afrịka
Nkuzi okpukpe nke ndi mmadu n’egosi echiche omimi nke ndi a, na-edobe iwu banyere omume a ga-edobe n’ebe Chineke nọ, na-akowa nmekorita nke nwoke na nwanyi, ndi ozo, na gburugburu ya. na-adụ ọdụ, ịchụ àjà na mkpuchi mmehie na àjà mkpuchi mmehie, wdg.
Akụkụ bụ isi nke nkuzi okpukpe Negro-Africa dị na ederede dị nsọ nke ndị nna nna anyị hà dere n'oge ha nọrọ na Kamita.
Anakwere ma dekwa ya n’agbata 2300 na 1550 tupu oge ndi Kristi, “Ederede nke Pyramids”, “Ederede nke Sarcophagi”, “Akwụkwọ nke Twozọ abụọ”, “Usoro nke Ọpụpụ n’ Daytụtụ. ”, Ga-aga n’ihu d 'narị afọ iri nke okpukpe atọ ahụ a na-akpọ akwụkwọ ahụ.
Ndi nwere agba atọ kachasị elu , a ga-ede Agba Ochie n'etiti narị afọ nke iteghete na 9 ruo afọ nke isii, Agba Ọhụụ nke aga-ede n'etiti afọ 6 na 50 AD nke a site na Koran gbara gburugburu 60 AD.
Oge ndagwurugwu a edere ede ederede nke ikpeazu na-akọwa, maka ọtụtụ akụkụ, mmetụta doro anya nke ha nwetara site n'aka ndị bu ha ụzọ nke ọma site n'aka ndị ode akwụkwọ ha.
1. Iwu nke omume: Inwe obi dika oria Maât ma gafere nyocha n’iru ulo ikpe Chukwu, onye nchoputa nke mbu nke Chineke, onye nlere anya n’Afrika, emeela ihe ndu ya niile n’oge ndumodu a. nke chi ukwu chikoputara na uzo iri-abuo na abuo (42) “nkwuputa nke nmebi-iwu”  ”.
O zuru ezu ịgụgharị, mgbe agụrụchara ndụmọdụ Ma’t, “iwu iri” ahụ nke Jahveh nyere Mozis ka ọ ghọta ihe doro anya mana ezughị oke nke emere site na ha.
Iji dee Akwụkwọ Ilu, ndị editọ nke Tora egbughi oge, na iji ọtụtụ ahịrịokwu ndị metụtara omume na maxims, na okwu ndị ọzọ '' Amamihe '' nke Amenemope, Ptahhotep, Ani , Rekmiré na Kagemi .
2- Inye ekele: Iji gosipụta ekele ya maka ịma mma nke okike, ikele Chineke maka ime ma na-aga n'ihu na -eme ka ụwa dị mma ma na-arịọ enyemaka na akara aka, Negro-African gafere:
2-1: Ekpere: Gchịkọta otuto na nsọpụrụ, ịrịọ arịrịọ na ịkpọ oku, enwere ike ikpe ekpere n’otu n’otu ma ọ bụ n’otu na ebe ọ bụla dị ọcha. Agbanyeghị, dabere na ebumnuche ahụ, isonye na mkpokọta nwere ike ịdị mkpa. Maka nke a, "ụlọ nke ndụ" ka emepụtara ka anata mmemme na-emetụta ndụ ndị obodo, ọkachasị.
Ọ bụrụ na a ga-ekpe ekpere n’oge ọ bụla, n’agbanyeghi, enwere ohere atọ amara site n’ịdị n’etiti ‘Khépri-Râ-Atoum’: chi ọbụbọ, etiti ehihie na chi ọbụbọ.
Ndị guzobere Jadaism, Iso andzọ Kraịst na Alakụba ga-eso ndị na-achọpụta Chukwu na nzọụkwụ. Ha ga emeputa otuto na ife ofufe, mpe ha na mkparita uka, ha ga ewuru ebe a na-anọ efe ofufe (ulo uka, ulo uka na alakụba), ha ga edowe otu oge ekpere ha ka ndi imam n’enye egwu n’ehihie na mgbede. Iso willzọ Kraịst ga-ekwusi n’ụbọchị Sọnde, ụbọchị anwụ, yabụ ụbọchị nke Osaịris nke okenye na ụbọchị nke kalenda ndị ọzọ niile.
2-2- Onyinye, aja nile na ichu-aja: N'ihi ihe omuma ya zuru oke banyere Chineke na nkwanye ugwu miri emi o nyere ya, ya mere maka ndu, onye mbu choputara ihe nile nke Chineke debere onyinye na àjà ndị chụpụrụ mwụfu ọbara mmadụ.
N'ihi ya, osisi, mkpụrụ osisi, nnụnụ, azụ, ehi, atụrụ na ewu kwadoro ọrụ nke nraranye ya na ntinye ya na arịrịọ ya.
Ndị guzobere okpukpe ndị Juu ga-akpachara anya na ụzọ a ndị mmadụ si ele ihe anya, na ha ga-ajụ àjà ụmụ ha mbụ chụrụ n'ọkpụkpụ ọbara ha bụ Moloch na Bel na ọbụna Jahveh. Ọ bụ otu a ka o si jiri ebugharị ebule maka ndị a aka ha dị ọcha ma nyefee ndị na-eso ụzọ Alakụba ha omume ọhụrụ.
Y’oburu na ndi guzobere Iso Christianityzọ Kraịst agbagharala ịchụ aja ahụ, ewezuga ụbọchị “Ezi Fraịde” mgbe ejiri azụ ahụ gbakwụnyere oke mmụọ na chi adịghị ama, ha ejidela onyinye ha, ọkachasị kandụl ma jiri ya mee ọtụtụ ihe, Ndị rabaị na-agbagharịkwa iji mee ka ebe ofufe ha dị ọcha.
2-3 -Ari oriri nsọ: akpọrọ Oriri Nsọ aha nke ndị bidoro Iso ,zọ Kraịst, oriri-nsọ bụ emume nke mejuputara ihe zuru ezu ma ọ bụ nke usoro.
Mgbe a gbasasịrị mmụọ nke Osaịris, akụkọ ifo ndị ahụ nwetara onwe ha n’ebe nzuzo ka ha gaa na ntinye nke Great Black iji wee soro, ya na ya na etiti ha. Ha riri achịcha ahụ gosiri achịcha ahụ, dụọkwa ọbara ya nke mmanya nọchiri anya ya. Dị ka anyị pụrụ ịhụ, Ndị guzobere Iso didzọ Kraịst emeghị ihe ọ bụla.
3- Ikpe nke ndi nwuru anwu: onye choputara Chukwu nke mbu, bu onye obula kere eke nke cheghariri n’iru ikpe a nke a gha aghaghi ime ka nmebi iwu nke mmadu ghara igha ozo. nke nsụhọ na ọgụgụ isi
Enwere ndị ọrụ iri anọ na abụọ nke ụlọ ikpe a maka ịtụle ogo ịdị ọcha nke ndị na-achọ Beatitude tupu ha enye ikike maka iwe ha na isi mmalite nke ndụ, ya bụ, na Chineke ( 42). Nke ọ bụla n'ime ha nwere ikike nke ịnọchite anya aha Kamita, Double Mba na otu n'ime ogo iri anọ na abụọ (42) dị na “nkwupụta nke adịghị ọcha” yana nnweta ya dị mkpa iji mezue okirikiri. ịlọ ụwa.
N’otu aka ahụ Negro-Africa chere echiche ikpe nke Chineke na nke Amenti iji kwenye na ụgwọ kachasị elu bụ na njedebe nke mbọ ahụ, n’otu aka ahụ, o chere ebe ọzọ ihe atụ, mana ahụhụ dị egwu ebe a ga-anabata ya. rue mgbe ebighebi nke ndi mmadu na ekwesighi ka a ghachighaa ozo. Ọnọdụ a nke enweghị nlọghachi bụ ọnwụ nke abụọ echekwara maka mkpụrụ obi dị arọ site na ịdị arọ nke imejọ ihe gabigara ókè. N'atufu njirimara nke onwe ha niile, ndị mmụọ mmụọ a na - enyere aka mee ka mmiri nke astral dị ala wee mepụta ihe dị iche iche ga - eme ka mpụ ha pụta.
N’agbanyereghị ezi ụlọ n’ụlọ nsọ nke Kamita, ndị guzobere okpukpe ndị Juu, Iso andzọ Kraịst na Alakụba were nkuzi a nke onye nyocha Chukwu nke mbụ maka isi okwu nkuzi ime mmụọ ya.
Ya mere, ezie na ha bu n’obi ime ka ndi mmadu di nghota ghota ufodu eziokwu nke kariri nghota ha, ha emeela “paradise” na “ala mo” site n’echiche puru iche nke puru iche nke ndi ochichi nke Africa.
Nghọtahie ha nwere n’oge a nke izizi Negro-Africa doro anya.
N’ezie, ozugbo ewepụchara anụ ahụ ya, mkpụrụ obi, nke bụ ezigbo mmadụ, na-amaliteghachi mmiri dị ọcha. O nweghizi mkpa aru aru: ya na inwe nmekorita adighi ozo, ya onwe ya achoghi ima nke aru. N’enweghi onu, afọ ya, ya n’anụ ahụ, ọ nweghịzi nri ma ọ bụ drinkụọ ihe ọ andụ andụ na-ajụ ya oyi. Nke a bụ ya mere enweghị ike ịnụ ụtọ ihe ụtọ ọ bụla ma ọ bụ na-ata ahụhụ site na ọkụ ọ bụla na-enyocha nne.
Ọ bụrụ na echiche nke echiche Negro-African okpukpe pụtara ìhè na nke okpukperechi atọ ahụ tụlere n'usoro ndị a, ọ bụ otu ihe ahụ na nkà ihe ọmụma okpukpe ndị ọzọ amụrụ na ndị ọzọ. kọntinent.
1- Na America: Site na ofufe nke anyanwu dika ihe nlere anya nke Chineke, owuwu pyramid, iji ihe aru aru, bu ihe nlepu anya nke nkpuru nke Chineke na ngwusi, nkera mmadu, nke anakpo. na ịchụ àjà, ọkachasị, ndị Olmecs na ndị Maịdị pre-Columbian, ndị Aztekis na post-Columbian Incas bụ ndị merela ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ site na onye nyocha mbụ nke Chukwu. Mbugharị nke ụyọkọ ojii ndị isi ojii na / ma ọ bụ ntọala nke otu site na otu nwere ike ịbụ nkọwa nke mmetụta a.
2- India: Site na nkwenye ịlaghachi azụ, echiche nke hypostasis (Brahma, Vishnu na Shiva), ihe nnọchianya nke chi ya, nkwenye ya na arụmọrụ nke àjà na ịchụ aja, nsọpụrụ nke Cow (the Negro-African hapi), Hindu, ejirila aka ya, zie ezi site na nkuzi nke onye nyocha Chukwu.
3- China: Site na nkwenye na ịlọ ụwa (Buddhism na Confucianism), nkwenye na Chukwu na nkwonkwo Chi ya na-esikwa ike site na nkwenye na ịdị adị nke mmụọ, site n'inye onyinye na iji onyinye tọ na ọgwụ ike (Taoism), ya na pyramid ya, ọkachasị, China agaghị apụ apụ.
4- Japan: Site na nkwenye ịlaghachi azụ (Buddhism), na nkwenye site na nkwenye nke chi ndị na-echebe, ndị Kami, onye Amida kacha mara amara, dịka Horus na-esi na lotus pụta mgbe niile. cha cha nke ifuru site na omume nke onyinye na aja (Shintoism), ndi Japan bu uru ozo nke mmepe obodo Negro-Africa.
Ọ bụrụ na ndị ọzọ kọwaala ya ọtụtụ mgbe, na echiche okpukpe Negro-Afrịka ka dị otu ebe niile na Naịjirịa Africa.
Okpukpe Neuro-nke Africa nke Kamita n’ezie, bu udi okpukpere chi nke ndi nna nna anyi ha mechiri. N'otu aka ahụ asụsụ Kamita bụ ọgbụgba agbaze nke asụsụ ndị Negro-Afrịka hụrụ onwe ha na Naịja Delta, yabụ mgbakwunye na nkwenkwe nke otu ndị a mụrụ nke okpukpe ndị kachasị arụzula. site na uche mmadu.
Ebe ọ bụla na Negro-Afrịka Africa, ebe niile na mba ndị ọbịa nọ n’obodo Negro-Africa ebe echiche Negro-Africa nwere ike ichebe onwe ya, ọhụụ nke ụwa, n’akụkụ ya abụọ na-ahụ anya na nke a na-adịghị ahụ anya, bụ otu ihe.
Nke a bụ nchikota nkenke, ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ nke ngosipụta dị iche iche nke okpukpe Nero-Africa:
• Abụọla nke Chukwu,
• ịpụ iche nke Chineke,
• Ma Chukwu ma nkpuke nke ihe okike ya,
• ihe nile ekere eke n’oyiyi ya,
• ndu ebighi-ebi n'ihi ndu ebighi-ebi.
• Mmekorita n'etiti nwanyị ojii ojii na onye otu ya, ọtụtụ nde afọ,
• ofufe nna ochie,
• sacralization nke omkoloji,
• ngbanye ọnụ niile n'etiti ụwa a na-ahụ anya na ụwa a na-adịghị ahụ anya,
• àjà udo na ịchụpụ mmadụ na osisi, ahịhịa na anụmanụ,
Maka na ọ dị mkpa inwe onyinye nke iche echiche ma ọ bụ ọkaibe na sayensị gbasara mgbaasị ịghọta na enweghị okike kwesịrị ya mbụ, ọ dị mkpa maka nwa ojii ojii Africa nke Africa na nke ọchịchịrị ụwa ịlaghachi ị drinkụ mmiri site na isi iyi.
Ọ bụ naanị otu a ka a ga-atọhapụ ya n'ụzọ ime mmụọ, n'ụzọ ọgụgụ isi, nke mmụọ, site na nkewa nke mmụọ ime mmụọ nke na-emebi ike okike ya.
Ọ bụ naanị otu a ka ọ ga-esi nweta ikike niile o nwere na onwe ya, na ike ya ijikọ ndụ na ụdị ọchichọ na obi ụtọ ya na onwe ya. ọ bụ ya kọwaa.
Site na Doumbi FAKOLY
 Negro-African aha Egypt
 Akwụkwọ banyere ndị nwụrụ anwụ nke ndị Ijipt oge ochie (Ed. Du Cerf, Paris 1967; isi 17, peeji 57).
 Papyrus Nesmin (lee mmalite nke Jenesis na nkuzi nke ụlọ nsọ Egypt ochie)
 ditto, isi 42, ibe 85.
 Nkee hotara, peeji nke 180.
Akwụkwọ nke nwụrụ anwụ nke ndị Ijipt oge ochie, isi 6, peeji nke 42.
 Yahdị Yahvist (narị afọ nke 9 BC), ụdị Elohist (narị afọ nke asaa BC), ụdị ndị ụkọchukwu (narị afọ nke isii BC)
 Akwụkwọ nke ndị nwụrụ anwụ nke ndị Ijipt oge ochie, nke ekwurularị, peeji nke 160 ruo 162.
 Akwụkwọ ọgụgụ ndị a tụrụ aro: Obenga Théophile: nkà ihe ọmụma Afrịka nke pharaonic oge, 2780-330 T.O.A. (Ed. L'Hamattan, Paris 119).
Geometry Egypt: ntinye nke Africa oge ochie na mgbakọ na mwepụ ụwa
Afrikhepri Foundation sur Akon Lighting Africa to Light 600 million Africa: "Daalụ Akon!" Jul 5, 17:36
Afrikhepri Foundation sur Eziokwu nke eziokwu - Akwụkwọ edemede (2016): "Magburu onwe ya akwụkwọ!" Jul 5, 17:12
Matthew sur Inye njem - Matthieu Grobli: "Akwụkwọ mara mma!" Jul 5, 17:00
Pịa ebe a iji hapụ ngalabax